Aluminium Checkered Plate Tread Factory - China Aluminium Checkered Plate Tread Manufacturer, mpamatsy
Misy karazana vy vita amin'ny aliminioma isan-karazany, ny mari-pahaizana amin'ny takelaka aluminium dia midika fa samy manana ny tombony manokana ananany ny karazana takelaka aluminium. ny vokatra aluminium lehibe misy anay, misy ny naoty 1000 vita amin'ny aliminioma toa ny 1050, 1060, 1100 takelaka aluminium, andiany 3000 toy ny takelaka 3003 vita amin'ny aliminioma ary ny lovia aluminium 8011.
Ny vidin'ny takelaka aluminium dia matetika miankina amin'ny vidin'ny firaka aluminium sy ny vidin'ny famokarana. Ny mpanjifa dia afaka mikaroka ny vidin'ny firaka aliminioma amin'ny Internet ary izao ny harato manan-kery lehibe indrindra dia ny LME (London Metal Exchange). Inona koa, zavatra iray tokony hojerena dia ny vatan'ny vokatra aliminioma, ny lanjan'ny lanja mahazatra dia taonina, kg ary kilao raha ny refy kosa dia refesina, mm ary santimetatra.
Fanoherana avo lenta indrindra 6061 T6 takelaka fanosorana aluminium
Natao hampiasaina amin'ny aerospace, fittings, valves, drive shafts, couplings, strukture, sign, ary ny fampiharana an-dranomasina ny 6061 T6 takela-by aluminium manana ny fanoherana ny harafesina avo indrindra amin'ny aliminioma rehetra izay notsaboina tamin'ny hafanana. Izy io dia firaka izay noforonina tamin'ny silicon sy manezioma. Izy io dia manana tanjaka ambany noho ny aluminium hafa azo ampitahaina, saingy mbola be mpampiasa.
Rust fanoherana tsara harafesina vita amin'ny vy vita amin'ny takela-by aluminium
Takelaka manitsaka aluminium dia azo ampiasaina amin'ny fananganana isan-karazany sy fananganana isan-karazany. Izany dia noho ny kalitaony maivana, maharitra, ambany fikojakojana. Takelaka misy takela-by aluminium dia takelaka metaly maivana ampiasaina ho tontolon'ny haingon-trano.
Ny alimo 1000 vita amin'ny aliminioma dia fantatra ihany koa amin'ny hoe "aliminioma tsy misy indostrialy", izay be mpampiasa indrindra amin'ny faritany maro, toy ny indostria, maritrano, trano haingon-trano, ranomasina, fiaramanidina, sns. Ny tombony manokana amin'ity andiany aluminium ity dia ny plastika avo lenta ary fitondra herinaratra tsara. Ny fomba fanendrena firaka aliminioma dia be ary azo anaovana borosy, voadio, fanonta, embossed, tsindriana, mitaona na vokatra aluminium hafa.
Ny fananana fahaiza-mamorona, mandavaka ary mihary tsara, ny Plate aluminium Diamond dia mora foronina ary ny lamina misy diamondra avoakany dia manome fanoherana tsara. Izahay izao dia mitahiry habe voafantina ao amin'ny FTQ na Fire Truck Quality Diamond Plate izay misy alitara vita sokitra eo an-tampon'ny diamondra ho an'ny hery fanampiny.